लकडाउन खुलेपछि वुहान शहरमा देखिएको खुशी ! – Khabarhouse
लकडाउन खुलेपछि वुहान शहरमा देखिएको खुशी !
Khabar house | २७ चैत्र २०७६, बिहीबार ०५:५८ | Comments
एजेन्सी, २७ चैत । को;रोना भाइरसको म’हामारी सुरु भएको चीनको हुबे प्रान्तस्थित वुहान सहरमा लगाइएको लकडाउन झण्डै तीन महिनापछि हटाइएको छ। साेमबार चीनमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या शून्यमा झरेकाे देखिएपछि मंगलबार प्रकोप सुरु भएको वुहान सहरमा लकडाउन हटाइएको हाे । मंगलबार लकडाउन खाेलेसँगै बुधबार वुहान शहरका मानिस बाहिर निस्किन छन् ।
मानिसहरु आफ्नो दैनिकीमा फर्किएका छन्। बुधबारबाट वुहानका सडक खुला भएका छन् । कर्मचारीहरुले राति नै सडकमा राखिएका अवरोधहरु हटाएका थिए । हवाई उडान पुनः सञ्चालनमा आएका छन् भने रेल सेवा सुरु भएको छ । यहाँका मानिसहरु चीन को अन्य भागमा जान पाएका छन् । को;रोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले वुहानमा लकडाउन निकै कडा पारेको थियो ।
शुरुमा मानिसहरुलाई पसलमा गएर खाद्यान्न किन्ने अनुमति थियो । तर मध्य फेब्रुअरीबाट मानिसहरुलाई घरको कम्पाउण्डबाट बाहिर निस्किने अनुमति दिइएन । यस्तोमा डेलि भरी चालक जीवन यापनको लागि निकै महत्व पूर्ण बने । १ करोड १० लाख मानिसहरू रहेको उक्त सहरमा गत जनवरी २३ देखि पूर्णतया सबैजसो व्यापार, व्यवसाय, यातायातका साधन बन्द गरिएको थियो । मानिसहरुलाई हिडडूल गर्न समेत बन्देज लगाइएको थियो ।